အမေရိကန်က ၎င်းရဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေကို နိုင်ငံအတွင်းက ဆုတ်ခွာဖို့ကြေညာပြီး ၂လအကြာမှာ အစ္စလာမ်အခြေခံမူဝါဒအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ တာလီဘန်တွေဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ Kabulကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်၊
လွန်ခဲ့သာ နှစ်၂၀ခန့်ကအမေရိကန်နဲ့ ဩစတြေးလျအပါအဝင် မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဟာ တာလီဘန် တွေ အင်အားကြီးထွားလာမှုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အာဖဂန် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အင်အား ၃သောင်းလောက်ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက် တာလီဘန် အဖွဲ့တိုးများလာမှုအရှိန်နှုန်းဟာ အာရှနိုင်ငံတဝှမ်းမှာ အံ့အားသင့်စရာ အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်၊
သို့သော်လည်းတာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာ Kapul မြို့ရဲ့ သမ္မတ အိမ်တော်အထိ ဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့် အမေရိကန်တွေရဲ့ လုံခြုံရေးဗျူဟာ ကျရှုံးမှုနဲ့ တာလီဘန် တွေရဲ့အင်အားကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်၊
ဒီနေရာမှာ စဉ်းစားစရာ မေးခွန်းတချို့ရှိလာပါတယ်၊တာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရသမား အင်အား 75,000က အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကို ဘယ်လိုမျိုး ဖြိုဖျက်ဖက်နိုင်ခဲ့တာလဲ? နိုင်ငံအနှံ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက် ကုန်ကျမည့် ငွေကြေးကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြသလဲ?
တာလီဘန်တွေဟာ ဝင်ငွေ AU$2.2 billion ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်၊
ထိုဝင်ငွေရဲ့မူလ အရင်းအမြစ်ဟာ ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ဘိန်းစိုက်ခြင်း၊ခြိမ်းခြောက်ငွေညစ်ခြင်း၊ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊တွင်းထွက်ပစ္စည်းတူးဖော်ခြင်း၊နဲ့ တာလီဘန်လက်အောက်ခံနယ်မြေဒေသ‌ တွေထံအခွန်ကောက်ခံခြင်းမှ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်၊
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ စုဆောင်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ တာလီဘန်တွေဟာ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို လူချမ်းသာတွေရဲ့ လှူဒါန်းမှုနဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကွန်ယက်ပေါ်ကထောက်ပံ့ပေးမှုတွေမှတဆင့်ရရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်၊
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တိတိကျကျမသိရခင်အခြေအနေမှာတောင် တာလီဘန်တွေရဲ့ တနှစ်စာဝင်ငွေဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 300 million(AU$400 million)မှ 1.6 billion (AU$2.2 billion)အတွင်းရှိပါတယ်၊
ထိုများပြားလှတဲ့ကိန်းဂဏန်းပမာဏတွေကို အဖွဲ့အစည်းက အရန်ငွေအဖြစ်သိမ်းထားပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လအထိ အဖွဲ့အစည်းရဲ့တစ်နှစ်စာဝင်ငွေဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၆billion ရှိကြောင်း တာလီဘန်အဖွဲ့တည်ထောင်သူ Mullah Mohammad Omarရဲ့ သားဖြစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင် Mullah Yaqoodကပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊
ဒီပမာဏဟာ အာဖဂန်အစိုးရဝင်ငွေရဲ့ သုံးပုံတပုံနဲ့ညီမျှပါတယ်၊
အမေရိကန်အာဖဂန် ဘူမိစစ်တမ်းအရ နိုင်ငံအတွင်းမတူးဖော်ရသေးသော သတ္ထုတွင်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ trillionရှိပါတယ်၊ ဒါ့အပြင်တာဘီဘန်တွေဟာ သတ္ထုတူးဖာ်ရေးနဲ့ ကြေးနီ၊ရေနံ၊ဓာတ်ငွေ့၊ဘော့၊ရွှေ၊သံရိုင်း နဲ့ လီသီယမ် သတ္ထုတူးဖော်ရေးအလုပ်သမားများထံ အခွန်ငွေကောက်ခံရာမှတဆင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ 464သန်း အကျိုးအမြတ် ရခဲ့ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊
တာလီဘန်တွေဟာ လက်အောက်ခံနယ်မြေတွေရဲ့ သတ္ထုတွင်းများမှတိုက်ရိုက်ဝင်ငွေရရှိရုံသာမက ပြိုင်ဘက်နယ်မြေရဲ့ သတ္တုတွင်းများမှ တဆင့် ‌ဝင်ငွေရရှိဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခံသူတဦးကပြောပါတယ်၊
ဘိန်းကို မော်ဖင်း၊ကိုဒင်း၊ဘိန်းဖြူတွေမှာ အသုံးပြုပြီး အဓိကဝင်ငွေစီးဆင်းရာအရင်းအမြစ်တွေထဲကတခုဖြစ်ပါတယ်၊
2020 ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့မူးယစ်ဆေးဝါး စစ်တမ်းတင်ပြချက်အရ ကမ္ဘာတဝှမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုရဲ့ 84%ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ ဝင်ငွေဆင်းသက်ရာ အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး အမြတ်အများစုဟာ တာလီဘန်အဖွဲ့အစည်းထဲကိုရောက်ရှိလျက်ရှိ‌ပါတယ်၊ဒါ့အပြင် အာဖဂန်နစ္စတန် သုတေသနနှင့်အကဲဖြတ်ဌာနရဲ့ ပြောကြားချက်အရ တာလီဘန်တွေဟာ ဘိန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကွင်းဆက်နေရာတိုင်းကို 10% အခွန်ဆောင်ရန် ချမှတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်၊
ငွေညစ်ခြင်းမှလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း160 ကို တာလီဘန် ဘဏ္ဍာတိုက်ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်၊ တာလီဘန်လက်အောက်မှာရှိတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမတွေကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါ ကားမောင်းသမားတွေဟာ ဖြတ်သန်းခပေးဆောင်ရပြီး ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိ ဆိုင်ရှင်တွေကလည်း အခွန်ဆောင်ဖို့‌ဖိအားပေးခံထားရပါတယ်၊ လယ်သမားတွေဟာလည်း ၎င်းတို့ရိတ်သိမ်းရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်ထဲ က 10% အခွန်ဆောင်ရတဲ့အပြင် ပိုင်ဆိုင်မှုအခွန်ငွေ 2.5% ကိုလည်းပေးဆောင်ရကြောင်း အာဖရန်နစ္စတန်လေ့လာရေးဌာနကစီးပွားရေးမူဝါဒ လေ့လာသူ Hanif Sufizadaကဆိုပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် မီဒီယာ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးတိုးတတ်ရေးစီမံကိန်း စက်ရုံတွေကလည်း အခွန်ငွေပေးဆောင်ရပါတယ်၊
တာလီဘန်တွေဟာအဓိကနယ်စပ်‌ ဒေသတွေရဲ့ တင်သွင်းမှုတွေကို သိမ်းယူပြီး အာဖဂန်ရဲ့ စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံအတွင်းသွင်းကုန်တင်သွင်းမှုမှတဆင့်ဒေါ်လာသန်းချီပြီး ထုတ်ယူလျက်ရှိပါတယ်၊တာလီဘန်တွေဟာ ပါကစ္စတန် အီရန် တာခ့်မင်နစ္စတန် တာဂျစ်ကစ္စတန်နယ်ခြားတွေရှိ အကောက်ခွန်နေရာ ၈နေရာကို ထိန်းသိမ်းပီးနောက် အာဖဂန်အစိုးရဟာ ဂျုလိုင်လထဲမှာတင် အာဖဂန်ငွေ ၂.၇ဘီလီယံ US ဒေါ်လာ၃၃သန်းဆုံးရှုံးခဲ့တယ်
တာလီဘန်တွေဟာ အဓိကနယ်စပ်ဖြတ်သန်းတဲ့နေရာတွေကို သိမ်းယူထားတာကြောင်ြ အာဖဂန်အစိုးရရဲ့ အခွန်ငွေ သိသိသာသာကျဆင်းစေပြီး ပြည်တွင်းဝင်ငွေထုတ်လုပ်မှုကိုလဲ အဟန့်အတားဖြစ်စေပါတယ်လို့ အာဖဂန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်တာဝန်ကျသူ အထူးစစ်ဆေးရေးအကြီးအကဲက ဂျူလိုင်လ 30ရက်နေ့ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်၊
2008 CIA ဌာနခွဲရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ တာလီဘန်တွေဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ106သန်းကို နိုင်ငံရပ်ခြားလှူဒါန်းမှုတွေမှရရှိခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ပင်လယ်ကွေ့‌ဒေသနိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်၊
သို့သော်လည်း BBC သတင်းဌာနက ၎င်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ လှူဒါန်းမှုဟာ တစ်နှစ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း500 ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်၊
1979-1989ခုနှစ် ဆိုဗီယက် အာဖဂန်စစ်ပွဲကာလမှာ လက်နှက်တွေ အပြည့်အဝရရှိခဲ့တာကြောင့် လက်နက်အလွန်အကျွံ အသုံးမပြုဖို့ တာဘီဘန်တွေက စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်၊ ထို့အပြင် တာလီဘန်တွေဟာ ၎င်းတို့ လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် ငွေအကြေးအများအပြားအကုန်အကျမခံကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအတွေးအခေါ် ဒါရိုက်တာ Kamran Bokhari က ဝါရှင်တန်သတင်းစာကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊
သူတို့ဟာ အိမ်ကြီးကြီးမှာမနေသလို ဖန်စီအဝတ်အစားတွေကိုလည်းမဝတ်ဆင်ပါဘူး၊ သူတို့ရဲ့ ကုန်ကျစရိက်တွေဟာ လစာလက်နက်နဲ့ လေ့ကျင့်ရေးအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်လို့ Bokhariကပြောခဲ့ပါတယ်၊
Previous Article အင်ဒိုနီးရှားက KF-21 Boramae တိုက်လေယာဉ်စီမံကိန်း၌ ပါဝင်မှုကို ပြန်လည်စတင်ဖို့ လူ၁၀၀ကိုရီးယားကိုလွှတ်မယ်
Next Article ဗြိတိန်ကတော့ C 17 လေယာဉ်ကြီးနဲ့တခါကိုလူ၈၀၀ကယ်ထုတ်နေ